Uyenza njani ibhloko kwiMicrostation (Iseli) -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Njengoko ukudala kwibloko Microstation (Cell)
KwiMicrostation iibhloko zibizwa ngokuba ziiseli (iiseli) nangona kwezinye iimeko ndivile ukuba zikwabizwa ngokuba ziiseli. Kule nqaku siza kubona indlela yokwenza kunye nokucinga okubenza bahluke kwiibhloko ze-AutoCAD.
1. Zisetyenziselwa ntoni iiseli?
Ngokungafani ne-GIS, apho umfuziselo uguqulwa ukusuka kwindawo kunye neempawu zayo, kwi-CAD kufuneka zibe nezinto ezibekwa kwijometri njengale:
Kwizicwangciso zokwakha ze-2D: iisimboli ezimele izindlu zangasese, iisinki, izibane, iindawo zombane, imithi, njl.
Kwiimephu zokuqala: iimpawu zesakhiwo sikawonkewonke, ibhuloho, icawa, isikhungo semfundo, njl.
Ezinye iziganeko eziqhelekileyo ziqhelekileyo isakhelo ejikeleze imephu, ehlengahlengiswa kwiphepha elithile lephepha kunye nalapho uxanduva lomntu owenza le projekthi luchanekile.
2. Ungazakha njani iiseli kwiMicrostation
Siza kucinga ukuba elona nani liphezulu yibhloko esifuna ukuyenza. Sisakhelo semephu eyi-1: 1,000 kwiphepha le-24 "36".
Le lesishwankathelo ebomvu kufanekisela 1 sheet scale: 1,000 (609.60 914.40 meters meters), ke wena uthathe indawo ngokungqinelana kwimida iyelenqe kunye ndilikhuphile ngaphakathi umnqongo kunye amavo eziyimfuneko.
Le dot ebomvu indawo yokufaka umdla wam, ngenxa yokuba naye ukubana kumda wesangqa reticle 1: 1,000 nje ngaphakathi, endiya achaze inqaku elizayo xa ndithetha malunga nendlela yokwenza umxholo wokushicilela usebenzisa i-Microstation.
Sakhetha izinto esizifuna ukuguqula kwiibhloko, ngaphandle kokufaka ibhokisi ebomvu yangaphandle.
Iphaneli yokulawula iiseli yenziwe yasebenza. Ukwenza oku, kwimeko yeMicrostation 8.8 ihlala iqinile kwaye ikhasa; kwimeko yeMicrostation V8i, cofa iqhosha lasekunene kwaye ukhethe ukhetho oza kulubonisa njengebharki edadayo.
Iqhosha likhethwa kuqala kwaye iglasi yokukhulisa.
Oku kuya kubangela ukuba uphakamiso lweelayibrari yebhloko liphakanyiswe.
Ilayibrari yohlobo .cel idalwe, oku kwenziwa ngayo Ifayile / entsha. Kwimeko apho sele sinethala leencwadi, lilayishwe nge Ifayile / Ifakela.
Emva koko, kufuneka sikuxelele apho ivelaphi kwibhloko yethu, leyo iya kuba yindawo yokufaka xa sisibiza.
Oku kwenziwa ngokusebenzisa umyalelo wesine kwibar yefowuni, kwaye ucofa kwikona langaphakathi legridi ye-UTM, njengoko ibonakala kwigrafu.
Njengalo mzuzwana, iqhosha elithi "Yenza" lisebenza.
Sinika ibhloko igama, kule meko iMarco1000 kunye nenkcazo yeMarco 1: 1,000. Bona ukuba inokubonwa kwangaphambili.
3. Indlela yokulayisha iiseli ezikhoyo
Ukubabiza, nqakraza kabini kwibhloko elithandayo, kwaye sele silungele ukungenisa, kunye nenketho yokukhetha isixa, ukujikeleza kunye nendawo yendawo.
Ukuba ufuna ukulayisha iibhloko ezikhoyo, i-AutoCAD ikuvumela ukuba ulayishe iibhloko ezisefayili ye-dxf / dwg kwaye yenziwa ngomyalelo weCopin Center.
I-Microstation ivumela iifom ezininzi
Iincwadi zeencwadi ze-Microstation (.cel kunye .dgnlib)
Iifayile zeCAD (.dgn, .dwg, .dxf)
Iifayile ze-GIS (.shp, .tab, .mif)
Ezinye iifom (.3ds, .obj, .3dm, .skp, .impx)
Ukubona iibhloko ezikhoyo kwifayile khetha ukhetho "Bonisa zonke iiseli kwindlela", ungaphinde ufake ifayile njengebhloko.
Ukuhlanganisa ifayile, sebenzisa umyalelo weDrop, usebenze ukhetho lweseli.
Ukukhuphela okukhoyo .cwangcisa iilayibrari ongazenzayo ufunde eli nqaku kwaye ukuguqula iibhloko kwi-AutoCAD kwiiseli ze I-Microstation le enye.
ICongress of Administration Land and Surveying
Ndingenza njani ukuhlela/ukuguqula "iseli" eyakhiwe ngaphambili?